PSG - PSG: Tuchel finalka Bayern Munich, Paris ma jecli doonto - FOOT 01 - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS PSG - PSG: Tuchel finalka Bayern Munich, Paris ma jecli doonto - FOOT 01
PSG - PSG: Tuchel finalka Bayern Munich, Paris ma jecli doonto - FOOT 01
Xilligii kumeel gaarka ahaa ee Hans-Dieter Flick, Bayern Munich waxay si firfircoon u raadineysaa tababaraheeda xiga. Liiska dheer ee musharixiinta, labo tababarayaal ayaa tartami doona.
La yaab maahan, in Bayern Munich ay codsiyo badan ka hesho guryaha Niko Kovac. Magacyo badan ayaa laxiriiraya muddo toddobaad ah, oo uu kujiro macallinka reer France ee Arsène Wenger. Laakiin muhimadda koowaad, tababarihii hore ee Arsenal ma noqon doono midka nasiib u yeeshay. Naadiga Bavaria ayaa runtii ku dhawaaqay in xogtiisa aan la haynin. Halka kooxda Alsatian ay sheeganeyso in kooxda heysata horyaalka Jarmalka inay la xiriirtay iyadoo aan wax talaabo ah laga qaadin dhankiisa.
Markay sidaas ahaato, Bayern waa inay diirada saartaa wadooyin kale. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo warbaahinta Dutch-ka De Telegraaf, dadka degan Bundesliga ayaa hoos u dhigi lahaa liiskiisa tartamayaasha laba magac. Dacwada koowaad waxay la xiriirtaa Erik ten Hag, Tababaraha Ajax Amsterdam kaasoo aan weli ka saarin bilowga xilli ciyaareed sarre. Marka laga reebo in isla waqtigaas, agaasimaha isboorti Marc Overmars uu qirtay in tababarahooda ay ku adkaan doonto in la xasuusto haddii Bavarians-ka la muujiyo.
Tuchel, way adkaan doontaa
Wadadani waxay umuuqdaan kuwa markaa la heli karo, inay aad uga badan yihiin tan keentay Thomas Tuchel. Haddii qiraalkeenu caddeeyo in Jarmalku uusan ahayn qorshaha B, waxaan horeyba ugu dhawaaqi karnaa in Paris Saint-Germain aysan si fudud u siidayn doonin. Xusuusnow in macallinka Parisi uu kordhiyay illaa 2021 bishii May ee la soo dhaafay. Tani sabab uma ahan in looga diido kooxda Bayern inay ka fiirsato Tuchel xagaaga soo aadan. Oo hel ku meel gaadh ah si aad u dhammaysato xilli xilliyeedka. Waxaa wali la arki karaa waxa uu farsamayaqaankii hore ee kooxda Borussia Dortmund u malaynayay.
JO 2020: Libaaxyada Indomability Libaaxyada ayaa ku soo dhacaya garoonka ciyaaraha ee Abidjan